Sarotra ny hampilamina ny fifamoivoizana eto Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mikorontana ny fifamoivoizana ao Antsirabe ka mihagoragora manaraka izay ihany koa ny fiarovana ny aim-bahoaka. Na dia efa foana nanjavona aza ireo takelaby famantarana na “panneaux de signalisation” any an-toerana, dia vao maika manao kitoatoa ireo mpamily. Araka ny nambaran’ity mpitondra cyclo-pousse ity, dia ny tsy fisian’ny toromarika mpanondro lalana mihitsy no nahatonga ilay fiara MAZDA handona ilay moto teo Avarantsena omaly, alarobia 22avrily, maraina alarobia, ary soa ihany fa mba tsy nisy naratra, saingy ny jiron’ity fiara kosa no potika. Marihana anefa fa ny olona ihany no manimba sy tsy manaja ireny takelaby ireny raha ny fanazavan’ny tomponandraikitra mikasika ny fifamoivoizana ao amin’ny ATT Ambohimena; misy ihany koa hoy izy ireo ny migafy tsotra izao ka mamolaka na manalana ny tsatoka fanambarana (panneaux de signalisation) eny an-tsisin-dalana. Zary ahitana fitohanan’ny fiara ankehitriny ao Antsirabe raha nilamina sy nizotra ara-dalàna izany teo aloha teo. Miezaka mandamina sy manaramaso akaiky ihany ny pôlisy ao an-tanàna, saingy ny taksibe no tena tsy manara-dalàna ka mifangalatra lalana aza ny ankamaroan’izy ireo raha vao variana ny mpitandro filaminana. Manampy trotraka ny fahateren’ny fifamoivoizana ihany koa ireo sarety lasa mandeha amin’ny antoandro, satria hatramin’izay dia voarara ary tsy azon’izy ireo atao izany noho ny fahabetsahan’ny olona mivezivezy, ary natao ihany koa izany mba hisorohana ny loza mety hitranga eny an-dalam-be.Raha ny ao Antsirabe manokana, dia ny mpandeha an-tongotra no tena mahita faisana amin’ny fisetrasetran’ny mpitondra fiara. Raha ny tokony ho izy hoy ity mpampianatra amin’ny sekoly fampianarana mitondra fiara na “auto-école” ity, dia ny mpandeha an-tongotra, na iza na iza, ilaina mahay fitsipika mifehy ny fifamoivoizana (code de la route) ihany koa. Matetika, vokatry ny tsy fitandreman’ny an-daniny sy ny an-kilany tokoa no miteraka ny lozam-pifamoivoizana.
Miandrandra vahaolana ny mponina
Ny mpitandro filaminana sy ny kaominina, ny ATT ary ny sampan-draharaha ara-teknika no tomponandraikitra voalohany amin’ny fiarovana ny aim-bahoaka amin’ny lafiny fifamoivoizana. Raha ny teo anivon’ny pôlisim-pirenena ao Antsirabe, dia nanamafy hatrany izy ireo fa tsy mijanona ny asa fandaminana ny tanàna ary indrindra ny fanasaziana ireny fiara mirimorimo tsy manara-dalàna ireny. Manaraka izany, tohizana ihany koa ny ezaka izay vita tamin’iny fetin’ny paka iny; raha tsiahivana dia nahatratra tanteraka ny tanjony ny pôlisy nasiônaly tao Antsirabe tamin’ny asaramanitra, satria tsy nisy na dia iray aza ny tranga-na lozam-pifamoivoizana. Araka izany, miasa andro aman’alina ireto tomponandraikitra amin’ny filaminam-bahoaka ireto. Mbola tsy manana fandaharan’asa momban’ny famerenana ny takelaby kosa ireo olona eo anivon’ny kaominina sy ny sampan-draharaha ara-teknika ambonivohitra raha ny voalazan’izy ireo. Kanefa kosa nampanantena izy ireo fa hojerena ny raharaha manontolo mikasika ny lalana ao an-drenivohitr’i Vakinankaratra mialoha ny fifidianana ben’ny tanàna amin’ny volana jolay, ka mety ho tafiditra amin’izay ihany ny fanamboarana vaovao ny tsato-by, toro-marika amin’ny lalana. Ny ATT izay misahana adidy maro amin’ny famoahana sy ny fanarahamaso ny alalana ahafahana mitondra fiara sy moto ary ny cyclo-pousse, dia hanome fepetra hentitra amin’ny alalan’ny haino aman-jery ao an-toerana ho an’ny mpamily rehetra, ka ho voasazy izay minia mikipy mandika io lalàna io.Ka tandremo ary ilay zatra manao lalan-dririna !